पर्यटकीय स्थल राम्चे ढुङ्गामा पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न ! – ebaglung.com
पर्यटकीय स्थल राम्चे ढुङ्गामा पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न !
२०७५ माघ २३, बुधबार १८:३०	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
थम्मन थापा, गल्काेट बागलुङ २०७५ माघ २३ । गल्कोट नगरपालिका ७ मल्मको पर्यटकीय स्थल राम्चे ढुङ्गामा पत्रकार भेटघाट तथा स्थलगत अवलोकन सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा कृयाशील पत्रकारहरु र राम्चे ढुङ्गा पर्यटन विकास केन्द्रका मल्मका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको उक्त स्थानमा आगामी दिनमा भौतिक पुर्वाधारको विकास सॅगै यसको चुनौति अवसर र सम्भावनाको विषयमा छलफल गरिएको थियो । सो अवसरमा पत्रकारहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको केन्द्रका अध्यक्ष विष्णु बहादुर थापाले जानकारी दिएका थिए। अध्यक्ष थापाले केन्द्रले पर्यटनको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको बारेमा समेत रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका सदस्य दल बहादुर थापाले निकट भविष्यमा राम्चे ढुङ्गामा प्यारागलाईडिङको व्यावसायिक उडान, विशेष सुविधा सम्पन्न पर्या पर्यटन उद्यान पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुरुप कार्य अगाडी बढाईएको बताए । त्यस्तै गल्कोट नगरपालिका वडा नं ७ का कार्यवहाक वडा अध्यक्ष लोक बहादुर थापाले पर्यटनको क्षेत्रमा क्रमश कार्यहरु बढाउन स्थानिय तह, प्रदेश र केन्द्रमा पहलकदमी सॅगै सहकार्य गरिने बताए ।
केन्द्रले राम्चे ढुङ्गालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न बागलुङ जिल्लाका पत्रकारहरुले खेलेको भुमिकाको प्रशंसा गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखालाई सम्मान समेत गरेको छ । शाखाका अध्यक्ष दिल शिरिषलाई दोसल्ला र मायाको चिनो सहित सम्मान गरिएको थियो । सम्मान पछि बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाका अध्यक्ष दिल शिरिषले राम्चे ढुङ्गा पर्यटनको सम्भावना रहेकोले यसको विकासमा लाग्न स्थानियलाई सुझाव दिए । त्यसको लागि सञ्चार माध्ययमले सदैव महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने समेत बताए । पत्रकारहरुलाई टोकरी आमा समुह र राम्चे ढुङ्गा पर्यटन विकास केन्द्रले फुलमालाले स्वागत सत्कार गरेका थिए ।
गुल्मी नेरा त्रिभुवन माविलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वरिष्ठ चन्दादातालाई सम्मान !
बडीगाड क्षेत्रको सम्वृद्धिका लागी संभावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम वामी टक्सारमा सुरु !